Wasiir Goodax oo sharraxay sababta ay ardayda Muqdisho ugu dhaceen imtixaanka | Gaaroodi News
Wasiir Goodax oo sharraxay sababta ay ardayda Muqdisho ugu dhaceen imtixaanka
September 7, 2020 | Published by: gaaroodi
Maalin ka dib markii Wasaaradda Waxbarashada ee dowladda Federaalka ay ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga sare, waxaa si weyn looga hadlay kumannaan arday oo wasaaradu ay sheegtay inay ku dhaceen imtixaankaasi gaar ahaan ardey badan oo ku sugan caasimadda Muqdisho.
Wasaarada waxbarashada waxay sheegtay in ay jiraan sababo u gaar ah ardayda caasimada, taas oo keentay in imtixaanka ay ku dhacaan.
Dad badan ayaa is weydiinaya sababta ay ku dhacday in Muqdisho oo ah hoyga waxbarashada ee Soomaaliya ay ardaydeeda badankooda ay ku dhacaan imitixaanka, maadaama sida la qiyaasayay ay “ka fursad wanaagsan yihiin” ardayda kale ee gobolada.
Cabdikarim Guuleyd, madaxweynihii hore ee Galmudug, waxbadanna ka soo shaqeeyay arrimaha waxbarashada ee Soomaaliya ayaa sheegay in natiijada ay ka soo baxday wasaaradda waxbarashada ay tahay wax laga naxo.
Wasiirka waxbarashada, Cabdullaahi Goodax Bare
Waxaa kale oo uu sheegay in jaantuska uu tusinayo in ardada gobalka Banaadir ka dhacday ay yihiin 7,873, taas oo ka dhigan in 90% ardeyda dhacday ay ahaayeen kuwa ka soo jeeda hal gobol, wuxuuna intaa ku daray in “taas ay shaki badan abuurtay”.
Dadka qaar ayaa su’aal geliyay qaabkii loo saxay imtixaanka dugsiga sare, haseyeeshee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sixidda imtixaanka ay tahay mid wasaaradda ay aad uga baaraandagtay.
“In imtixaanka ay ardayda ka dhacaan waa in ay aysan ku guuleysanin. Sida loo saxo imtixaanka halkii maado ee qofkiiba waxaa saxa saddex qof, ka dibna waxaa uga sii dambeeya, qofka kale oo eegaya sidii wax loo saxay ka dibna kormeeraya, waxaana sidoo kale jira dad kale oo isku daraya dhibcaha ardayga uu helo iyo hubintooda, waxaana isleenahay sidii ugu quruxda badneyd ayaa loo saxay”, ayuu yiri Cabdullaahi Goodax Barre oo ah Wasiirka Waxbarashada.
Waxaa kale oo uu sheegay in qofka macallinka ah ee saxaya imtixaanka uusan aqoonin ardayga magaciisa, skoolka uu dhigto iyo gobolka uu ka soo jeedo, maadaama la qariyay.
“Wax qarsoon ma ahan sida imtixaanka loo saxo oo walibana sannadkan waxaan ku casuumnay kuwa ay iska soo xuleen, kuwaas oo marqaati ka ahaa sida loo saxato imtixaanka”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiir Goodax Bare.
Maxaa keenay in gobolka Banaadir uu ku liito imtixaanka?
Wasaaradda Waxbarashada ee Dowladda Federaalka ayaa sheegtay in natiijadii sannadkii hore ay lamid aheyd tan sannadkan la shaaciyay oo ardayda ugu badan ee ka dhacay imtixaanka ay ahaayeen kuwo dhiganayay iskuullada gobolka Banaadir.
Sida uu wasiirka sheegay, boqolkiiba konton ardayda imtixaanka gasha oo intooda badan ka soo jeeda magaalada Muqdisho, sababta ay u dheceen waxay tahay in “iskoolada gaarka loo leeyahay ay ardayda boobsiiyaan, taas oo keentay in wax ka qaldamaan tayada waxbarasho ee ardayda.”
Arrintaas oo sameyn ku yeelatay ardeyda Muqdisho ayuu sheegay in ay tallaabo ka qaadeen.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya, markii uu ku dhawaaqay natiijada imtixaanka waxaa kale oo uu sheegay in macallin la’aanta ay qeyb ka tahay dhibaatada, maadaama sida uu sheegay ay macallimiinta aanan la siinin mushaar wanaagsan, fursdaha kale ee ay ka heli karaan magaaladana ay badan tahay.
Amniga ayuu wasiirka sheegay in sidoo kale saameyn ku yeeshay waxbarashada gobolka Banaadir. Cudurka corona ayaa la aaminsan yahay in uu sidoo kale uu saameeyay waxbarashada gobolka Banaadir, maadaama arday badan aanay aadin iskoolada intii ay iskoolada xirnaayeen.